Nahoana Train zavatra mahasolafaka no Tsara Kokoa Noho Road zavatra mahasolafaka | Save A Train
Home > Travel Europe > Nahoana Train zavatra mahasolafaka no Tsara Kokoa Noho Road zavatra mahasolafaka
Fotoana famakiana: 3 minitra(Last Nohavaozina: 07/06/2020)
Rehefa mieritreritra ny fety ho an'ny fianakaviana iray, mpivady na vondrona ny namana, fa matetika sarotra ny hahazo ny olon-drehetra mba mitovy hevitra. Zavatra iray loha dia ho mora ny manaiky amin'ny, na izany aza, dia raha hanofa fiara na mandeha lamasinina. Ity no mahatonga lamasinina zavatra mahasolafaka dia tsara noho ny lalana zavatra mahasolafaka.
Tsy misy olona tsy maintsy mitondra fiara
Rehefa naka ny dia lavitra, olona manana ny ho foana ny mpamily. Midika izany fa ny olona iray, fara fahakeliny, tsy maintsy tonga amin'ny tapany tsirairay ny toerana itodiana reraka. Add ny adin-tsaina ny Fikarohana sy ny mety hisian'ny ny fahaverezany, ary ianao ho famandrihana ny saran-dalana misy androany, dia namaky ny antony lamasinina zavatra mahasolafaka ny fomba mandeha.
Amsterdam mankany London miaraka amin'ny lamasinina
Rotterdam mankany Londres miaraka amin'ny lamasinina
Paris mankany London miaraka amin'ny lamasinina
Brussels mankany Londres miaraka amina lamasinina
Fampiononana sy ny fomba fijeriny
Raha toa ve ianao nandeha dia lavitra ny fahazazana, ianao fantatrao momba ny ady ho an'ny seza am-baravarankely, satria tsy misy olona te-ho squashed eo afovoan'ny seza aoriana. Tamin'ny mitaingina ny fiaran-dalamby zavatra mahasolafaka, seza rehetra Dia samy mahazo aina ary manana fijery tsara. Ny toerana ny toetra vaovao Trenitalia fiarandalamby no tena mahazo aina, ka ho azo antoka ny boky dia lavitra ny Frecciarossa fiaran-dalamby haingam-pandeha.
Mifangaro amin'i Zurich miaraka amin'ny lamasinina
Lucerne mankany Zurich miaraka amin'ny lamasinina
Bern ho an'i Zurich miaraka amin'ny lamasinina
Genève mankany Zurich miaraka amin'ny lamasinina
Train zavatra mahasolafaka sy Matoria ary ny fiaran-dalamby
In fiara, ny mpandeha ihany no afaka matory ary na dia avy eo, fa tsy mampahazo aina ao amin'ny fandriana. Overnight fiarandalamby dia manan-tsaina fomba mahazo ny toerana manaraka raha mbola mafy ihany koa fahavaratra ny zavatra ilaina ny alina.
London mankany Brussel miaraka amin'ny lamasinina
Brussels mankany Cologne miaraka amin'ny lamasinina
Cologne mankany Vienna miaraka amin'ny lamasinina
Cologne mankany Innsbruck miaraka amin'ny lamasinina
Parking vs Train zavatra mahasolafaka
Ao amin'ny dia lavitra iray, mila mitady toerana mijanona ny fiara soa aman-tsara nandritra ny alina. Inona no sarotra kokoa aza, dia ny fitadiavana toerana Park ao tanan-dehibe amin'ny faritra sy ny mpizaha tany, indrindra ireo faritra tahaka ny Colisée in Roma na ny Duomo ny Florence in Florence. Koa satria ny toerana dia amin'ny Premium manodidina ireo toerana, fijanonana vidin'ny iray koa Premium.
Brussels mankany Amsterdam miaraka amin'ny lamasinina
Road Travel dia malaza noho ny famokarana entona karbaona avo, sy ny bateria niasa fiara dia sarotra sy lafo ny hanakarama. Soa ihany – misy fomba tsara kokoa. fiaran-dalamby zavatra mahasolafaka – indrindra fa amin'ny fiarandalamby vaovao – manana be ambany fiantraikany eo amin'ny reny eto an-tany, mba afaka mankafy ny fialan-tsasatra ho meloka-maimaim-poana.
Vonona ny hamaky ny fiaran-dalamby fiaran-dalanao? Visit Save A Train ary hahazo ny saran-dalana mora indrindra.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-train-tripping-is-better-than-road-tripping%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
longtrainjourneys roadtrip fiaran-dalamby nankany